Kanaana, faritra - mpanao sary hosodoko malagasy Info
★ Kanaana, faritra - mpanao sary hosodoko malagasy ..
★ Kanaana (faritra)
Tao aminny Tany Kanaana hebreo: Erets Kenaan no nonenani Abrama alohanny naha Abrahama azy araka ny hita ao aminny Bokinny Genesisy Gen. 11.31, 12.5, 13.12, 16.3. NampanantenainAndriamanitra ho lovanny taranaki Abrahama ny Tany Kanaana araka ny hita ao aminio boky io Gen. 17.8. Tao koa no nahafatesani Saraha vadini Abrahama sy nandevenana azy Gen. 23.2, 23.19.
Tsy nanaiky ny zananany haka vehivavy kanaanita no vady i Isaka Gen. 28.1, 28.6, 28.8, 31.18. Izany no nitadiavani Jakoba vady tany aminny taninireo havany Gen. 33.18, 35.6. I Esao kosa tsy nanaraka izany fa naka vady kanaanita Gen. 36.2-6, 37.1.
Ny tantarani Josefa izay namidinireo rahalahiny sy ny nahatonga azy lasa mpanapaka tao Egipta dia iresahana matetika ao aminny Baiboly ny fandehananny zanaki Jakoba mandroso sy miverina eo anelanelani Kanaana sy i Egipta Gen. 42.5-32, 44.8. Rehefa nifankahalala i Josefa sy ny rahakahiny dia naka an-drainy sy ny fianakaviany avy tany Kanaana ho any Egipta Gen. 45.17-25, 46.6 sy 12 sy 31, 47.1-4, 47.13-15. Rehefa maty i Jakoba dia nentina tany Kanaana mba halevina any ny taolambalony Gen. 48.3 sy 7, 49.30, 50.5 sy 13.
Ny Bokini Josoa na Bokini Josoe izay manohy ny fitantarana ao aminny Bokinny Eksodosy dia miresaka ny Tany Kanaana rehefa tafapetraka ao ny Zanaki Israely. Isanizany ny aminny tsy nihinanana intsony ny mana Jos. 5.12, ny fizaràna ny tany Jos. 14.1, 21.2, ireo fifanolanana nisy teo aminny fokoni Israely mpifanolo-bodirindrina Jos. 22.9-11, 22.32, ny fahatsiarovani Josoa na Josoe ny nitondrany ny Zanaki Israely niampita ony Jordana Jos. 24.3.
Resahina ao aminny Bokinny Levitikosy na Levitika sy ny Bokinny Nomery na Fanisana ary ny Bokinny Deoteronomia na Deoteronomy koa ny Tany Kanaana in-3 ao aminny Levitikosy, in-11 ao aminny Nomery, in-2 ao aminny Deoteronomia.
Ny teny hoe Kanaana grika: Χαναάν / Khanaán dia hita intelo ao aminny Testamenta Vaovao, ka indroa ao aminny Asanny Apostoly Asa 7.11, 13.19 izay mamerina ny tantara ao aminny Testamenta Taloha, ary indray mandeha ao aminny famoahana ny demonia taminny rahavavinilay vehivavy sirofenisiana na sirofoinikiana. Ny fitantarana farany dia hita ao aminny Filazantsara araka ani Matio sy ny Filazantsara araka ani Marka, mampiasa ny teny hoe Kanaaneana na Kanaanita grika: Χαναναία / Khananaia i Matio, fa i Marka kosa miantso anilay vehivevy hoe Sirofenisiana grika: Συροφοινίκισσα / Surophoinikissa.
Ny sivilizasiona kananeana dia vokatry ny toetany marin-toerana izay naharitra hatry ny ela nefa indraindray sembaninny fiovanny toetrandro. Nandritra ireo vanim-potoana ireo dia nahay nanararaotra ny toerana eo afovoanny sivilizasionani tany Afovoany Atsinanana sy i Egipta tranainy ary i Mesopotamia sy ny Hitita ary i Kreta minoàna, mba hahatonga azy ireo ho tanàna-fajakana tapahinandriandahy mpanao raharaham-barotra manaraka ny morontsiraka, izay misy fanjakà-mpanjaka mifantoka manokana aminny vokatry ny fambolena eny afovoanny tanety. Izany fifanoherana ara-toekarenny tanàna amorontsiraka sy ny tanàna anaty tany izany dia hita taratra aminireo fedrà kananita maneho ny adinny andriamanitry ny orambaratra atao hoe Teshub ao aminireo Horiana na Horita na Baal Hadad ao aminny Amorita sy Arameana aminny andriamanitry ny ranomasina sy ny renirano atao hoe Yaa na Yaw na Yahu na Yam. Taminny fiandohanny sivilizasiona kananeana dia maro ny tanàna mimanda misy tsena, voahodidinny tanànananny tantsaha misahana fambolena voninkazo sy oliva natokana ho anny varotra sy fambolena voaloboka sy hazo voanjo siantifika: Pistacia vera, voahodidina fambolena varimbazaha sy orza. Ny fotoam-piotazana sy ny fijinjana aminny fiantombohanny fahavaratra dia fotoanny fifidrafidran-toeranny mpiompy mitondra ny bibifiompiny hitady sakafo, tsy afa-mihetsika ny mpiandry ondry mandritra ny fotoanny orana ka mandeha mody mba hamahana ny bibifiompiny aminny taho sy ny ravinny zavamaniry sisanny fijinjana, izay akaiky kokoa ny tahirin-drano aminny fahavaratra. Manaporofo izany tsingerim-potoanny fambolena izany ny tetiandroni Gezer sy ny tsingerin-taona voalaza ao aminny Baiboly.
Matetika dia miteraka fahavoazana ho anny fambolena ny fiovanny toetrandro haingana, noho izany dia soloana aminny vokatra hohanina ny vokatry ny fambolena natao hamidy, ny fifindrafidranny mpiompy dia manjary mibahana ny taona manontolo, fa ny andiam-poko dia mivezivezy any avaratri Eofrata na any atsimoni Telolafini Egipta miaraka aminny bibifiompiny. Matetika ireo filoha mpitarika foko no mipoitra tampoka ka manafika ny andianolona mpifahavalo aminy sady manome valisoa ireo mpomba azy aminny alalanny entana voababony na fitakiana fadin-tseranana aminny entam-barotra. Raha mitambatra ka miara-manafika ny tanàna maromaro na raha misy Fanjakana mpifanolo-bodirindrina mandray anjara na raha misy filoha mpitarika iharam-pahavoazana ka resy, dia voa koa ireo mpiray ady aminy na miverina indray ny ady eo aminny samy foko. Ny tantaranireo razambenny Israelita Patriarka ao aminny Baiboly dia ahitana taratra anizany. Nandritra ny fotoana naharavanny Fanjakana akadiana tany Mesopotamia sy taminny fotoana entenantenanny fanjakani Egipta tranainy sy ny fanafihanny Hiksosy ary ny fiafaranny Andronny Alimo antenantenany tao Asiria sy tao Babilona ary ny faharavànny Andronny Alimo aoriana dia nihena ny raharaham-barotra tao aminny faritri Kanaana, satria i Egipta sy i Babilona ary i Asiria dia lasa nitoka-monina. Rehefa miverina marin-toerana aminizay ny toetany dia mahazo aina koa ny varotra manamorona ny ranomasina aminireo tanàna filistina sy fenisiana. Rehefa nihamilamina ny varotra dia nisy ny fanamboaran-dalana vaovao halehanny entam-barotra sy hialàna aminny fandoavana fadin-tseranana lafo loatra izay niforona taminny morontsiraka hatrany Kadesy Barnea ka hatrany Hebrona sy Lakisy sy Jerosalema sy Betela sy Samaria sy Sikema sy Silo izay mamaky ani Galilea na Galilia hatrany Jezrela sy Hazora ary Megido. Nisy tanàna kanaanita tsy dia malaza nihanandroso taminio faritra io. Nisy lalana fahatelo falehanny entam-barotra niforona teo anelanelani Eilata sy Timna sy Edoma Seira sy Moaba sy Amona ary ireo mankany aminny Fanjakana arameanani Damasy na Damaskosy sy Palmira. Ireo Fanjakana tranainy dia nanandrana nifehy ny varotra anatiny nefa tsy nahita fahombiazana.
Ny fiteny amônita.
Ny fiteny fenisiana.
Ny fiteny hebreo.
Ny fiteny môabita.
Ny fiteny ponika.
Ny fiteny ogaritika.
amin ny Kor any izay manondro an i Kanaana zanak i Noa maty tamin ny safodrano iantsoana faritra iray, dia i Kanaana na Kanana na Kanahana izay fantatra
afa - tsy ireo izay ampamirapiratany ny famindram - pony. Dia nisavoana ny rano ka nitelina ny olona rehetra. Kanaana Kanaana zanak i Hama Kanaana faritra
Zemarita ary ny Hamatita. Avy amin ny anaran i Kanaana ny anaran ilay faritra atao hoe Kanaana na Tany Kanaana izay nampanantenain Andriamanitra ny Zanak i
amin ny tanin i Kanaana izay faritra mahafaoka an i Israely, i Jordania, i Sinay, i Libàna, i Siria, ny tanin i Palestina ary koa faritra sasany ao Torkia
I Jerosalema dia tanàna any amin ny faritra Kanaana nonenan ny Jebosita tamin ny Andro Taloha izay azon i Davida mpanjaka ka nataony renivohitry ny
I Palestina dia faritra ara - tantara sy ara - jeôgrafia ao Atsinanana Akaiky izay eo anelanelan ny Ranomasina Mediteranea sy ny tany efitra ao atsinanan
fiteny edômita dia fiteny tao Kanaana izay mitovitoty amin ny fiteny hebreo, izay notenenin ny Edomita tao amin ny faritra mifanandrify amin i Jordania
manerana ny faritra Atsinanana Akaiky tamin ny Andro Taloha. Ny Kanaanita dia ireo vahoaka nonina tao amin ny faritra atao hoe Kanaana izay tao andrefan
fiteny avy ao amin ny morontsirak i Libàna, ao amin ny faritra atao hoe tanin i Kanaana na tany Kanana araka ny fiantsoan ny Fenisiana sy ny
izay atao hoe fiteny kartazinoa na fiteny feniko - ponika dia fiteny tao Kanaana karazan ny fiteny fenisiana efa tsy mpiteny intsony, isan ny fiteny semitika
kanaana (faritra), mpanao sary hosodoko malagasy. kanaana (faritra),
kanaana (faritra) mpanao sary hosodoko malagasy. kanaana (faritra)